Vahaolana fanaraha-maso ny marary - Medical Aid International
Vahaolana fanaraha-maso ny marary
Afaka manome vahaolana isan-karazany amin’ny fanaraha-maso izahay, natao ho an’ny fomba fanatoranana ampiasaina. Ireo dia manomboka amin’ny oximeter pulsa ka hatramin’ny mpanara-maso izay misy ny fari-pitsipika mahazatra rehetra toa ny CO2 sy ny mpitsabo fanatoranana ary koa ny mari-pana ary koa ny safidy fanaraha-maso manafika.
Mampiasa milina Mindray izahay satria hitanay fa tena azo atokisana izy ireo, orinasa tsara hiara-miasa ary lafo vidy amin’ny fifaninanana.
Matetika izahay no mamatsy iray amin’ny milina roa. Voalohany, ny milina Mindray VS 900. Izany dia ny fihenan’ny tosidrà sy ny saturation ôksizena ary manana fahaiza-manairana sy bisikileta feno. Faharoa, matetika isika dia manome monitor Mindray iray hafa izay misy ny ECG sy ny CO2, ary koa ny saturation oxygen sy ny tosidra.
Ny masinina rehetra dia manana famerenana bateria ary omena kojakoja roa amin’ny olon-dehibe isaky ny teraka.